'प्रदेश सरकार बिचौलियाको जालमा फस्यो'-(अन्तरवार्ता) - The Public Today
‘प्रदेश सरकार बिचौलियाको जालमा फस्यो’-(अन्तरवार्ता)
२४ पुष २०७६, बिहीबार १०:२२
तीन तहको सरकार देशमा सक्रिय छ । स्थानिय सरकार ,प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको काम कारवाहीमाथि प्रति प्रश्न उठिरहेको बेलामा प्रदेश नम्वर – २ को प्रदेश सभा निरन्तर अबरुद्ध हुदैं आइरहेको छ । सदन अबद्धध गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका एक भएका छन् ।
उपभोक्ता समितिले गरेको विकास निर्माण सम्बन्धी कामको बिल फर्छौट नगरेको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरुले सदन अवरुद्ध गरेको छ । उपभोक्ताहरुले फर्जी बिल पेश गरेर भुक्तानी लिन खोजेको पनि बाहिरिएको छ । सदनमा मन्त्री र सांसदबिच आरोप प्रतिआरोप चलिरहेको छ । कुटाकुट हुने बतावरण पनि सिर्जना भइसकेको छ । कतिपय सांसदको घरमा त उपभोक्ताहरु जान्छन् र रितै हात घर फर्किन्छन । यो बिषयलाई लिएर अख्तियारमा उजुरी पनि परेको छ भने, संसदीय अनुगमन टोलीले फर्जी काम भएको भनेर रिपोर्ट पनि सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । साँच्चकै काम गर्ने उपभोक्ता समितिहरु मारमा परेका छन् । र फर्जी काम गरेर बिल बनाउनेहरु दाउ खोजिरहेका छन् ।
यसै बिषयमा प्रदेश सभा सदस्य सारदा देवी थापासंग युवा पत्रकार तथा समाजिक अभियन्ता राजकरण महतोले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ :
👉अहिले दिनहुँ सांसदको घरमा उपभोक्ताहरु किन पुग्छन्, माननिय ज्यू ?
–प्रदेश सरकारको कारणले गर्दा उपभोक्ताहरुले गरेको काम बापत समयमै भुतानी नपाएकाले अहिले सांसदहरुको घर घेर्ने कार्यक्रम पनि हुदैं आएको छ । बिकासको आयोजना दियौ तर समयमा भुक्तानी दिन सकेका छैनौ । उनीहरु भुक्तानीको लागि सांसदहरुको घर– घरमा पुग्न बाध्य बनेका छन् ।
👉सांसदको घर मात्र हैन प्रदेशसभा नै घेराउ गरेको अवस्था छ नि ?
–उपभोक्ताले प्रदेशसभा घेराउ गर्न ढिलाई गरेको हो । यो कार्य पहिलानै गनुपर्ने थियो । उपभोक्ताले सुरुमै भुक्तानी नपाउदा प्रदेस सभा घेराउ गरेको भए सबै निकास आउने थियो । अलि ढिलो भयो । दशै अगाडीनै भुक्तानी भनेतापनि अनुगमन टोली बनाएर अनुगमन गरियो । अनुगमन गरेर रिपोर्ट दियो । त्यसले केही भएन । पछि सांसदहरुको दवाबमा सभामुखको संयोजत्वमा अनुगमन टोली बनाई प्रदेश नम्वर–२ का सम्पुर्ण योजनाको अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । हामीले ईन्जिनियरलाई राखेर के, कति, कसरी ? काम गर्नुपर्ने, सल्लाह अनुसार विकासका काम संचालन भयो । उपभोक्ता समयमा आफ्नो भुक्तानी पाउन् भनेर आफुपनि काम गरेको छौ । यति सम्मकी अनुगमन समितिले प्रतिवेदन पनि बुझाई सकेका छन् । तरपनि उपभोक्ताहरुले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
मर्ने त उच्च स्तरका होईन, तल्लो स्तरका जनता हो । जनतालाई प्रदेश सरकारले फसाए । दशैमा सबैले मासु खाएर रमाए । तर जनता रोएर बसे । उपभोक्ता चौकमा गयो, भने हार्डवेयर पसलले रडको पैसा खोई ? सिमेन्टको पैसा खोई ? भन्छ । ट्रयक्टरबाला भेटेपछि मेरो गिट्टीको पैसा खोई ? वालुवाको पैसा खोई ? भनेर तकेता गरेको छ । मिक्चरबाला भेट्यो भने मेरो मिक्चरको पैसा खोई ? भन्छ । जनता भागेर काहाँ जान्छ ? उपभोक्ताले समाउने भनेको हामीलाई । हामीले कसलाई समाउने ? हामीले सदनमा बोल्नुको बाहेक अरु विकल्प छैन ।
👉काम गरेका उपभोक्ताले किन भुक्तानी पाउन सकेका छैन ?
–गहुँसंग घुन पिसिएको छ । पहिलो दिएको रिपोर्टमा पछि अनुगमन कर्ताले दिएको रिपोर्टमा केही गलत देखिएकोले हामी काम गर्ने न गर्ने सबै शंकामा घेरामा परेको छ ।
जस्तै बारा पर्सा तिर सामुदायिक भवन बनाएको छ । सामुदायिक भवनको रंगरोगन सबै पुरा भएको भनेर भौतिक मन्त्रालयमा बिल बुझाई सकेको छ । तर अनुगमन समिति जादाँ कुनै काम भएको छैन । पर्खालका एउटा ईट्टा पनि देखिएको छैन । स्कुलमा कम्प्युटर दिएको भनेर खरिदको बिल पेस भइसकेको छ । फर्छौट भइसकेको छ । तर त्यो स्कुलमा एउटा कलम पनि किनेको छैन । त्यो कारणले सबैको भुक्तानी रोकिएको छ । कागजी विकास गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ ।
👉सरकारले किन उपभोक्ताहरुको समस्या सम्बोधन गन सकिरहेको छैन ?
– मैले दिएको योजनामा अनुगमनकर्ताले कुनै किसिमको त्रुुटी भेटेको छ भने मेरो योजनाको भुक्तानी रोकिदिनुस्, म पनि भन्छु । मेरो योजनाको कुनै हिनामिना भएको छैन भने भुक्तानी दिनुपर्छ । तपाई भ्रष्टाचारी गर्ने, तपाई अनियमिता गर्ने , तपाई दुई नम्वरी गर्ने अनि मार र दुःख हामीले भोग्नुपर्ने , गरिब जनताले भोग्नुपर्ने यस्तो रबैया रहयो भने सदनको बजेटमा कसले काम गर्छ । सदनको लापर्वाही जिम्मेवार मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, भ्रष्टाचारीहरुको फाईलमा सही गर्न हुने र बिधिवत काम गर्नेलाई सचिवले सही गरदिएन । लगेको प्रतिवेदन पास हुन सकेन, भनेर आलटाल गर्ने सदन भन्दा ठुलो सचिव हो ? सदन चलाउने सचिव हो वा सचिव चलाउने सदन हो ।
👉मुख्यमन्त्रिसंग यो प्रश्नको जवाफ माग्नुहुन्न तपाईहरु ?
–यो सबै प्रश्नको जवाफ मुख्य मन्त्री लगायत सम्वन्धीत मन्त्रीले दिनुपर्ने हो । यदि तपाई कुरामा सत्यता होईन भने अहिले यो खेल किन भईराखेको छ । बिचौलिकाको खेलको कारण सोझा र साधारण जनता अन्यायमा परेका छन् । सरकार समाज परिवर्तणमा लागेको छ । यो सरकार घर–घरमा सिंहदरवारको अधिकार घर–घरमा पु¥याउने भनेर लागेको छ । तर काहाँ पुग्यो त्यो अभियान , काहाँ पुग्यो त्यो सेवा । काम गरेको भुक्तानी असार मसान्तमा भन्यो, दशै अगाडी भन्यो , छठ अगाडी भन्यो , चुनाव अगाडी भन्यो अब यो सरकारसंग सदनमा जवाफ चाहियो । हामीले मुख्यमन्त्रीसंग जवाफ माग्यौ, अर्थमनत्रीसंग जवाफ माग्यौ । कानुन मन्त्री लगाएर जवाफ दिन लगायो । हामीले अस्वीकार ग¥यौं । जवाफ नदिने अवस्थामा उहाँहरु हुुनुहुन्छ । के हो कारण ? यदि उहाँहरु बिचौलियामा नपरेको भए जवाफ दिन किन कठिन हुन्छ ?
👉फेरि मुख्यमन्त्री भन्नुहुन्छ, म भ्रष्टचारी बिरोधी छु ?
–भनेको कुरो व्यहवारमा लागु हुनुप¥यो नि ! क्यमराको अगाडी, चार जनाको अगाडी अख्तियारको अगाडी बोल्दैमा भ्रष्टाचार निवारण भएको छ, त ! उहाँले छातीमा हात राखेर हेनुस्, बोलेर मात्र हुदैन । उहाँले नेतृत्व गरेको प्रदेशमा कतिको भ्रष्टचारी भइरहेको छ ? त्यो कसैबाट छुटेको कुरा हैन । उहाँ जुन कुरा बोल्नु हुन्छ वा स्वच्छ प्रदेश बनाउन चाहनु हुन्छ भने पुरा पार्दशी हुनुपर्छ । अरु कुरामा नभएपनि बजेटको कुरामा पार्दशी हुनुपर्छ । किन पार्दशी गर्नु भएको छैन त जवाफ दिन सकिरहनु भएको छैन । मलाई यो कुरा कठिन भयो भनेर कुरा किन राख्न सकेका छैन त ? किन भने, उहाँ बोल्ने एक थरी व्यहवार, कामअर्को थरी । बोलाई र गराइमा एकरुपता पाएको छैन ।